ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလတွင်လမ်းညွှန် - ကျွန်ုပ်ဖျားနာလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ဒီရောဂါကူးစက်မှုရဲ့နောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်ခုကတော့ သငျသညျဖျားနာဖို့ '' တားမြစ်ထားသည် '' နီးပါးဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဆေးရုံအမြောက်အများသည် SARS-CoV-2 လူနာများအားကုသခံနေရခြင်းကြောင့်လုံးဝပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်နှစ်ဆအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်ရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ကျန်းမာရေးစင်တာများနှင့်ဆေးရုံများသို့သွားခြင်းကသင့်အားကူးစက်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းသည် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိစေသည်။ နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ရရှိသောအာရုံကိုအလွန်ပြည့်နှက်ခံရခြင်းသည်အခြားအခြေအနေများတွင်သင်ရရှိနိုင်သောအရာနှင့်မတူပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ နာမကျန်းမှုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပြproblemနာမဆိုCovid-19 နှင့်သက်ဆိုင်သူများသာမဟုတ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ ယခုအချိန်တွင် coronavirus နှင့်ဆက်နွယ်သောသေဆုံးမှုအနည်းငယ်တိုးလာသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဆေးရုံများ၏ပြည့်နှက်မှုကြောင့်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်အပြုသဘောဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်အမှုများသည်ယခုအခါအချို့သောရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း၊ အကယ်၍ သင့်မှာပြconsiderableနာအတော်များများရှိတယ်ဆိုရင်၊ ၎င်းကိုလျစ်လျူရှုပြီးကျန်းမာရေးစင်တာများသို့မသွားသင့်ပါ။ နှလုံးရောဂါစသည့်ပြင်းထန်သောရောဂါများရှိသည့်လူနာများအနေဖြင့်လည်းဆေးရုံသို့သွားသောအခါရောဂါကူးစက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဆေးကုသမှုရက်ချိန်းများလျော့နည်းကျဆင်းလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အမှန်တရားကတော့သန့်ရှင်းတဲ့နေရာတွေကိုသန့်ရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ညစ်ညမ်းတဲ့လူနာတွေကိုရောဂါကူးစက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ coronavirus လူနာတွေကိုကုသပေးတယ်။
အခြားသူများကမူဖြစ်နိုင်သမျှနေသမျှကာလပတ်လုံးအိမ်မှာနေချင်တယ် နောက်ထပ်ဆေးရုံများပြိုလဲခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပြီးတော့သူတို့ခံစားနေရတာတွေဟာတက်ရောက်ဖို့လုံလောက်မှုမရှိ၊ မဖြစ်ဆိုတာသံသယတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ သူတို့အားသံသယအားလုံးဒီလမ်းညွှန်နှင့်အတူရှင်းလင်းရပါမည်။
1 ငါ XNUMX ကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပါစို့
3 Telematic ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ
ငါ XNUMX ကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုပါစို့
ဒီမှာပါ အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများအကြားခွဲခြား သင်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာကိုမဆိုတွေ့ရှိပါကအရေးပေါ်ခန်းသို့ခေါ်သင့်၊ မသင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်။
coronavirus ၏ရောဂါလက္ခဏာများအကယ်၍ သင့်တွင် SARS-CoV-2 ကူးစက်မှု၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းစသည့်ရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသင်လေ့လာသင့်သည်မှာ၎င်းသည် Covid-19 သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ငါပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသို့မဟုတ်မတည့်သည်- ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသို့မဟုတ်ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရလျှင်အထူးသဖြင့်ယခုနွေ ဦး ရာသီတွင်ရှူရှိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကဲ့သို့သောသဟဇာတဖြစ်သောလက္ခဏာအချို့ကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းသည်ဖျားနာခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် coronavirus ဟုတ်မဟုတ်သိရန်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်အပြင်ထွက်ပြီးဝတ်မှုန်ကူးစက်ခံရရင်ပိုဆိုးသွားရင်ဒါကဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ်သော့ချက်ကတော့ antiihistamines ဆေးတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကပြုတ်သွားပြီလားတိုးတက်လာသလား၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်လျှင်သင်သည်ပုံမှန်ပုံမှန်စောင့်ရှောက်မှုပုံမှန်လုပ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေများကိုမခေါ်သင့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ် hypochondria ကိုရှာဖွေခြင်းသည်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အခြားအရာတစ်ခုဟုသင်ထင်မြင်စေနိုင်သည်။
အခြားကိစ္စရပ်များ- အကယ်၍ သင့်တွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာမပြပါက၎င်းသည်အအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်တုပ်ကွေးရောဂါမှအခြားပြfromနာများအထိဖြစ်နိုင်သည်။ Covid-19 ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး သို့သော်၊ အကယ်၍ ဖျားနာခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများသည်နှစ်ရက်သို့မဟုတ်သုံးရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့် ပို၍ ပင်ဆိုးရွားလာသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါကသူတို့သည်သင့်အားအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ကျန်းမာရေးစင်တာသို့သွားသင့်သည်။
အခြားရောဂါလက္ခဏာများ- ရောဂါလက္ခဏာများပျော့ပျောင်းလျှင်ခေတ္တခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သော၊ မပြင်းထန်သောပြproblemsနာများနှင့်မပြိုကွဲစေရန်အရေးပေါ်ခန်းသို့မသွားသင့်ပါ။ ရင်ဘတ်နာခြင်းသို့မဟုတ်တင်းကျပ်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်တွင်အလွန်ပြင်းထန်သောနာကျင်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်းစသည့်အခြားပိုမိုလေးနက်သည့်လက္ခဏာများရှိပါကချက်ချင်းအကူအညီလိုအပ်သည့်ပြင်းထန်သောပြproblemsနာများ (နှလုံးရောဂါ၊ ပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါများသို့မဟုတ်အကျိတ်များ၊ အူအတက်ဒိုက်စ်) ကိုပြနိုင်သည်။ , ... ) ။ သင့်တွင်စိုးရိမ်ဖွယ်လက္ခဏာများရှိပါကအရေးပေါ်ဌာနသို့ဖုန်းဆက်ပါ။
သတိရ မိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသခြင်းမပြုရသို့မဟုတ်အရေးကြီးသောဆေးကုသမှုရက်ချိန်းများကိုရှောင်ပါ သငျသညျမဆိုလေးနက်ရောဂါဗေဒခံစားနေရလျှင်။ ဆေးရုံသို့သွားရန်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
စပိန်၏အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်းကိုဖွင့်ထားသည် ဖုန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖုန်းခေါ်ဆိုပါ Covid-19 အတွက်အရေးပေါ်သို့မဟုတ်အရေးပေါ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါက၊ သင်သည် SARS-CoV-2 လက္ခဏာများရှိပါကထိုအရေးပေါ်ဖုန်းများပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန် 061 သို့မဟုတ် 112 ကိုဖုန်းမဆက်သင့်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏ CC.AA. ၏တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကိုသင့်အားလမ်းညွှန်ချက်အချို့ပေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ် coronavirus ခံစားနေရသည်ဆိုပါကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
သူတို့အား ဖုန်းများရရှိနိုင် သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
နေရီကျွန်းစု: 900 112 061
Cantabria: 112 သို့မဟုတ် 061
မက်ဒရစ်၏အဝန်း: 900 102 112
Navarra ၏ Foral အဝန်း: 948 290 290
Valencian အသိုင်းအဝိုင်း: 900 300 555
Balearic ကျွန်းများ: -
Murcia ဒေသ: 900 121 212
Basque နိုင်ငံ: 900 203 050
Asturias ၏နိယာမ: -
ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစင်တာကိုသွားပါ ဆေးညွှန်းခံရဖို့ ၎င်းသည်ကူးစက်ပြန့်ပွားသည့်အရင်းအမြစ်သို့မသွားရန်အချို့နေရာများတွင်ဤအားသွင်းမှုကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ဖြတ်ကျော်သွားခြင်းအပြင်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာကောင်းသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးတွင်တူညီသောအလုပ်မလုပ်ပါ။ အရေးပေါ်အစီအစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်စီမံချက်အချို့ကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကုသမှုကိုခံယူရန်လိုအပ်သောသန့်ရှင်းရေးအာမခံချက်များဖြင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေသော်လည်းလူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုပဲ။
ဆေးဝါးများ၏ထောက်ပံ့မှုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေရန်အစီအမံ CC.AA. တစ်ခုချင်းစီတွင် ဒါနဲ့တူလိမ့်မယ်
Andalusia- SAS သည် Salud Responde အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ဆေးဝါးများစုဆောင်းခြင်းကိုလည်းကူညီခဲ့သည်။ ထိုနေရာမှသင်သည် SARS-CoV-2 နှင့် ပါတ်သက်၍ ခန့်မှန်းခြင်းများကိုစီမံခြင်း၊
Aragon- အီလက်ထရောနစ်ဆေးညွှန်းမှတစ်ဆင့်ရက်ပေါင်း ၉၀ ကုသမှုပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Balearics။ ဒီလမ်းကြောင်းကနှစ်ဆရှိနိုင်တယ်၊ ဆေးဆိုင်ကို ၁၅ ရက်ကြာကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်နာတာရှည်နေမကောင်းဖြစ်နေသောလူနာများအတွက် ၂ လအလိုအလျောက်တိုးချဲ့ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Cantabria- ဆေးဝါးမှဆေးကိုကောက်ယူမည့်အစားဆေးကဒ်ပြားနှင့် PIN နံပါတ်ပါသောအီလက်ထရောနစ်ဆေးညွှန်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ဆေးညွှန်းသို့မဟုတ်ကုသမှုစာရွက်လိုအပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
Castile နှင့် Leonအရင်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသစ်ရှိတယ်။
မက်ဒရစ်၏အဝန်း: ဤကိစ္စတွင်သူတို့သည်တူညီသောရေရှည်ကုသမှုလိုအပ်သည့်နာတာရှည်ရောဂါများတွင်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွက်ဆေးညွှန်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ဆေးဆိုင်များစွာစတင်သည်ကိုလည်းသင်သိသင့်သည် အိမ်မှာဆေးဝါးများ၏ပေးပို့ လူတွေရွှေ့ဖို့မလိုပါဘူး။ ၎င်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများသို့မဟုတ်ရွေ့လျားမှုပြproblemsနာရှိသူများနှင့်ဤအချိန်တွင်တစ် ဦး တည်းနေသောသူများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားမှာဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါ Pharmacius app ကို Android အတွက် Google Play မှာအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့သင်လိုအပ်တာကို ၀ ယ်နိုင်တယ်။
အပြင်ချက်ပြုတ်နည်းများမှ, သင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းစဉ်းစားနေကြသည် အပြည့်အဝဆက်သွယ်ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ။ လူနာများဆေးခန်းသို့သွားရန်မလိုသောဤချိန်းဆိုမှုအမျိုးအစားများကိုပုဂ္ဂလိကအာမခံများက ပို၍ ဝန်ခံသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အိမ်မှသူတို့ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု / ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးထိရောက်သောနည်းဖြင့်“ တိုင်ပင်” သည်။
La စပိန်ပြည်တွင်းဆေးပညာအသင်း (SEMI) နှင့်စပိန်မိသားစုနှင့်လူထုဆေးပညာအသင်း (semiFYC) သူတို့သည် DKV အုပ်စု၏ # MédicosfrentealCovidအစီအစဉ်၏ပူးပေါင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဤအာမခံရှိသူများအားလုံးသည်အွန်လိုင်းအကြံဥာဏ်များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်နည်းပါးစွာဖြင့်ရရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏အားလပ်ချိန်များတွင်သို့မဟုတ်ဆေးကုသမှုခံယူသူများအနေဖြင့်သူတို့သည် Covid-19 မှဆေးရုံအရေးပေါ်အခြေအနေကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်လူနာများကိုတက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
များစွာသောပလက်ဖောင်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်သင်ကဲ့သို့သောကျွမ်းကျင်သူများကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်နေရာများပျံ့နှံ့နေသည် သင့်ကိုကူညီနိုင်သောစိတ်ပညာရှင်နှင့်နည်းပြ ဤခက်ခဲသောအချိန်များတွင် Skype မှတဆင့်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအက်ပလီကေးရှင်း၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်းများမှဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်လိုအပ်တဲ့အခါဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွမ်းကျင်သူရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ IFeelOnline ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်သို့မဟုတ်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ကိုယခုအချိန်တွင်ဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်ရွေ့ပြောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဤဆက်သွယ်ရေးအကူအညီကိုသင်ရယူနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလတွင်လမ်းညွှန် - ကျွန်ုပ်ဖျားနာလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။